I-Twitter yi-Injini Yami Entsha Yokucinga | Martech Zone
I-Twitter iyinjini Yami Yokucinga Entsha
NgoMgqibelo, ngoMashi 15, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Njengamanje ngiyalandela Abantu abangu-341 ku-Twitter. Ngithinte abakwaTwitter ngabacela ukuthi banike amandla 'ukulandela okuzenzakalelayo'. Lokho kusho ukuthi uma ungilandela, ngiyakulandela ngokuzenzakalela. Akusona isici esibhalwe phansi futhi asikho kusixhumi esibonakalayo somsebenzisi… kepha othile wangitshela ngakho, ngakho-ke ngakucela futhi ngomusa ngakuTwitter.
Kunezingxoxo eziningi kuwebhu mayelana ne-Twitter futhi lokho kungenzeka noma kungenzeka hhayi be a imfucuza of isikhathi.
Njengoba amathuluzi amasha wokuxhumana nobuchwepheshe buvela kuwebhu kuvame ukuba nezinguquko ekusebenziseni kwabo, mhlawumbe, obekulindelwe ngabadali bazo. Kuphela namuhla ngibonile ukuthi ngisebenzisa kangakanani i-Twitter njengenjini yokusesha, nokuthi ngisetshenziswa kanjani njengenjini yokusesha ngabanye. Kubonakala kimi ukuthi iTwitter ekugcineni ingahle ithathe isinqamu esithile kobunye ubuchwepheshe - mhlawumbe isibonelo sesifunda ChaChainjini yokusesha esebenzisa amandla obuchopho.
UChaCha akatholanga njalo the okuhle kakhulu Cindezela - futhi ngokweqiniso angikaze ngikuqonde ukuthi icala lebhizinisi laliyini ngalo. Abantu abasekela ukusesha kubonakala kungasebenzi kahle. Futhi mhlawumbe kungukuthi… uma uyinkampani hhayi umphakathi.
Lokho kusho ukuthi inzuzo ye-Twitter njengenjini yokusesha iyamangalisa. Ngiye ngazungeza ngochwepheshe bezebhizinisi, abangane kanye nozakwethu engikujabulela ukuhlanganyela nabo nokufunda kubo. Ngiyabahlonipha ngokuzimela, abayisihambi ngakolunye uhlangothi lwewebhu. Futhi njengoba isibalo sabantu engiqale ukubalandela sesisikhulu - ngokunjalo nekhwalithi nobungako bezimpendulo engizitholile lapho ngibhala umbuzo.
Lapho ngibuza ngesihleli sezithombe esiku-inthanethi, abantu ababili baphendula ngaso leso sikhathi I-Aviary. Lapho ngicela i I-Slideshare enye indlela (behle kakhulu muva nje), ngithole izimpendulo ezingekho ngaphansi kweshumi nambili. FUTHI, ngikwazile ukuphendula futhi 'ngacubungula kahle' umbuzo wami ukuthola isisombululo esifanele. Nge Twitter, Ngingakucwengisisa ukusesha kwami, ngithole imibono, nezincomo ngokushesha ngangokunokwenzeka lapho ngingachofoza imiphumela embalwa ku -Google.
Uma ukhathazekile ngokulandela okuningi kakhulu ku-Twitter, mhlawumbe ungakucabanga ngombono ohlukile. I-Twitter iyinjini yami yokusesha entsha.
Tags: Sesha MarketingTwitterukusesha kwe-twitter
Ividiyo: Ukuqonda iTwitter
Ukuchitha Kwezimakethe Kuthuthela Kusesho
Mar 15, 2008 ku-11: 31 AM
Hhayi ukuzwakala njengendoda eyi-yebo, kepha ngiyavumelana nawo wonke amagama. I-Twitter ibe yinhle ngokusiza ukuthola ulwazi. Abantu bakhona bayesabeka impela.
Mar 15, 2008 ku-7: 13 PM
UDoug, ngemuva kokufunda okuthunyelwe kwakho, ngivele ngaya kubhalisa. Kodwa-ke, othile usebenzise igama lami lomsebenzisi, ngakho-ke kufanele ngilishintshe. Inkinga kuphela, angazi ukuthi ngizoba kanjani umlandeli noma ngilandele kanjani umuntu. Igama lami lomsebenzisi ngu-dratanone. Ngicela ungingeze ohlwini lwakho lwabalandeli? Ngiyabonga, uDoug.
Mar 15, 2008 ku-10: 47 PM
Ngibhekile futhi ngiyakulandela ngakho-ke kubonakala sengathi ukuthole lokho!
Halala futhi sizokubona ku-Twitter!
Mar 15, 2008 ku-7: 46 PM
Okuthunyelwe okuhle nami noDoug siyavuma - kungaba ngumthombo wangempela! Ngizokungeza manje!
Mar 16, 2008 ku-12: 25 PM
Manje usungasebenzisa i-ChaCha nge-Twitter. Iya ku http://www.twitter.com/ChaCha bese ulandela i-twitter. Lapho-ke uma wenza umyalezo oqondile (d ChaCha) ngombuzo, uzobuya nomyalezo oqondile ngempendulo yakho. Bafake izintambo kwinsizakalo yabo yokuphendula ngemibhalo engama-242242 ku-Twitter.
Mar 16, 2008 ku-2: 42 PM
Nami ngendlela efanayo… Mhlawumbe Ukucinga Komphakathi kabusha. I-Twitter izongena esikhundleni se-SEO… Lokho kungaba my ukuzama - zama ukusesha ibhulogi yami 😛
Mar 17, 2008 ku-6: 53 AM
Kuphela namuhla ngiqale ukusebenzisa i-Twitter. Kwephuze kancane ku-bandwagon, kepha ngiyabona impela ukuthi kungani abanye bekuthola kuwusizo kangaka.
Ngiyethemba uphilile, Doug.
Mar 17, 2008 ku-3: 54 PM
UDouglas- Nami ngingumlandeli omkhulu we-twitter. Kukunika amandla okuxhumana ngamazwibela amancane ayisisekelo salokho ocabangayo noma owabelana ngakho. I-Plus igcwele i-savvy-adopter zakuqala nabathandi bewebhu. Bengingakezwanga ngokulandela okuzenzakalelayo, kepha kuyisici esihle impela! Siyabonga ngokwabelana ngaleyo.